कस्ले जित्ला लिग कप उपाधि ?‘लिभरपुल वा म्यान्चेस्टर सिटी’
२०७२ माघ १४ बिहिबार, एजेन्सी । इङ्गलिश लिग कप (क्यापिटल वान कप) को फाइनल भिडन्त दुई इङ्गलिश क्लबबीच हुने भएको छ । म्यान्चेस्टर सिटी लिग कपको फाइनलमा पुगे संगै दुई इङ्गलिश टोली लिभरपुल र सिटीको फाइनल भेट पक्का भएको हो । उपाधि भिडन्त आउँदो फेब्रुअरी २८ अर्थात फागुन १६ गते हुनेछ । सेमिफाइनल दोस्रो लेगमा सिटीले घरेलु मैदानमा एभर्टनलाई ३–१ ले हरायो । पहिलो लेगको खेलमा एभर्टनसँग २–१ ले पराजित सिटीले बुधबार राती घरेलु मैदानमा जित निकाल्दै समग्रमा ४–३ ले फाइनल यात्रा तय ग ... बाँकी अंश»
आइसीसी यू–१९ विश्वकप : न्यूजिल्याण्डलाई जित्लान् नेपाली युवाले ?
२०७२ माघ १३ बुधबार, काठमाडौं । १९ वर्ष मुनिको आइसीसी विश्वकप क्रिकेट वुधबारबाट बंगलादेशमा सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बङ्गलादेश र दक्षिण अफ्रिका तथा फिजी र इङ्गल्याण्ड आमने सामने भएका छन् । नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा विहिबार बिहान ८ः४५ बजे न्यूजिल्याण्डसंग खेल्ने छ । खान शहेब मैदानमा हुने समूह ‘डी’ को खेलमा नेपाल न्यूजिल्याण्डलाई हराउदै अघिल्लो चरणमा पुग्ने बलियो आधार बनाउने सुरमा छ । न्यूजिल्याण्ड आफ्नो पहिलो खेल जित्दै नकआउट चरण पुग्ने दाउमा छ ... बाँकी अंश»
यु-१९ विश्वकप क्रिकेट: बंगलादेश र ईङल्याण्ड बिजयी
२०७२ माघ १३ बुधबार, काठमाडौं। आईसीसी यु-१९ विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता बंगलादेशमा शुरु भएको छ। ४ समुहमा बिभाजित २० टोलीमा नेपाल समुह 'डी'मा रहेको छ। समुह डीमा नेपाल लगायत भारत, न्युजिल्याण्ड र आयरल्याण्ड रहेका छन्। त्यसैगरि समुह 'ए'मा दक्षिण अफ्रिका, बंगलादेश, स्कटल्याण्ड र नामिबिया रहेका छन् भने समुह 'बी'मा पाकिस्तान, श्रिलंका, अफगानिस्तान र क्यानाडा रहेका छन्। ईङल्याण्, वेष्ट ईण्डिज, जिम्बाब्वे र फिजी भने समुह 'सी'मा रहेका छन्। बंगलादेश- दक्षिण अफ ... बाँकी अंश»
काठमाडौंका फुटसल व्यवसायीलाई कानुनको परिबन्ध, कार्यविधि तयार
२०७२ माघ १३ बुधबार, काठमाडौं । च्याखे नथाप्ने र दाउ नहान्ने शर्तमा प्रतिबन्ध लागेको दोस्रो दिनमै खुलेका फुटसल संचालनको कार्यविधि तयार भएको छ । कार्यविधि पारित हुने वित्तिकै सबै फुटसलहरु कानुनी दायरामा आउने छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले हाम्राकुरासंग भने,‘कार्यविधि बनाउने जिम्मा व्यवसायीहरुसंगको सम्झौतामा सहभागि सम्बन्धित निकाय जिल्ला घरेलु कार्यालयलाई दिएका थियौं, मंगलबार मात्रै मेरो कुरा कानी भएको थियो, त्यहाँबाट घरेलुको डिजी सा ... बाँकी अंश»
टेण्डीले राकेशलाई भेटे
२०७२ माघ १२ मंगलबार, काठमाडौं । १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा नेपालको सहभागितालाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् उपाध्यक्ष लामा टेण्डी शेर्पाले मङ्गलबार भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतीय ओलम्पिक कमिटीका उपमहासचिव राकेश गुप्तासँग छलफल गरेका छन् । गुप्ता १२ औँ साग खेलकुदका टेक्निकल कन्डक्ट कमिटीका उपाध्यक्ष समेत हुन् । सो अवसरमा उपमहासचिव गुप्ताले नेपालको खेलकुदको विकास र विस्तारमा भारतीय ओलम्पिकबाट ६ सकारात्मक सहयोग रहने बाचा गरेक ... बाँकी अंश»
इङ्गल्याण्डविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाको जित, श्रृंखला जोगाउन सकेन
२०७२ माघ १२ मंगलबार, एजेन्सी । सेन्चुरियनमा भएको चौथो तथा अन्मि टेष्ट क्रिकेटमा घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिका विजयी भएको छ । अन्तिम टेस्ट हारे पनि इङ्गल्याण्डले श्रृंखला समग्रमा २–१ ले जितेको छ । । टस जितेर पहिले व्याटिङ्ग रोजेको दक्षिण अफ्रिका लागि डेव्यु म्याच खेलिरहेका स्टेफेन कुकको १ सय १५ रनको मद्दत तथा अन्य दुई ब्याट्स म्यानसको शतकिय पारीको मद्दतले पहिलो इनिङमा ४ सय ७५ रन जोड्यो । वलिङ्ग तर्फ इङ्गल्याणका वेन स्टोकले सर्वाधिक ४ विकेट लिए । इङ्गल् ... बाँकी अंश»
राखेपलाई सर्वोच्चले भन्यो किन तदर्थ समिति गठन गरेको ?
२०७२ माघ ११ सोमबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नाममा नेपाल क्रिकेट संघको नयाँ निर्वाचित कमिटीलाई मान्यता नदिई आफैं समानान्तर अर्को तदर्थ समिति गठन गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले सोमबार गरेको आदेशमा परिषदलाई एक साता भित्रमा लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन भनेको हो । रमेश शिलवालको नेतृत्वमा राखेपले गठन गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको तदर्थ समितिलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउने ... बाँकी अंश»
चतुरबहादुर चन्दपक्षलाई स्टे अर्डर, क्यानको तदर्थ समितिलाई तत्काल काम नगर्न सर्वोच्चको निर्देशन
२०७२ माघ ११ सोमबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको नेपाल क्रिकेटसंघ क्यानको तदर्थ समितिलाई तत्काल काम कारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, चतुरबहादुर चन्दको निर्वाचित कार्यसमितिलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । चन्द पक्ष केही दिन अघि मात्रै निर्वाचित कार्यसमिति हुँदा हुँदै तदर्थ समिति गठन गरेको भन्दै सर्बोच्च पुगेको थियो । ... बाँकी अंश»
‘४ गोल’ नेपाली फुटबल सफलताको संयोग (१९८४ देखि २०१६ सम्म)
२०७२ माघ ११ सोमबार, काठमाडौं । प्रतियोगिताहरु जहिले पनि खेलाडीको कला–कौशलले जितिन्छन् । तर, मेहनत र कौशलले जितिने खेलहरुमा पनि केही अनौठा संयोग जोडिएका हुन्छन् । यस्तै, संयोग नेपाल र माल्दिभ्सको फुटबल खेलमा रहयो । जुन संयोगले नेपाली फुटबलको २३ वर्षे फुटबल इतिहासमा एक अपार खुसी जोडिदियो । अनौंठो संयोग हो ‘४ गोल’ । नेपाल र माल्दिभ्स धेरै पटक आमने सामने भएका छन् तर, प्रतियोगिता जित्ने क्रममा ४ गोलको संयोग अर्थपूर्ण देखिएको छ । सन् १९८४ मा काठमाडौंमा भएको प ... बाँकी अंश»
चेल्सीले आर्सनललाई हरायो, स्वान्सी रेलिगेशन क्षेत्रबाट जोगियो
२०७२ माघ ११ सोमबार, एजेन्सी । इङ्गलिश प्रिमियर लिग फुटबलमा संकग्रस्त इंङ्गलिश क्लब चेल्सीले आर्सनललाई हराएको छ । आइतबार राति आर्सनलकै मैदानमा चेल्सीले १–० को जित निकालेको हो । डिएगो कोष्टाले २३ औं मिनेटमा गरेको गोल नै चेल्सीलाई विजयी गराउन निर्णायक बन्यो । आर्सनलका डिफेन्डर पर माटेसाकर १८औ मिनेटमै रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरीएपछि घरेलु टोली १० जनामा समेटियो । चेल्सीका ३ खेलाडीले समेत पहेंलो कार्ड खाए । यो नितसंगै चेल्सी २३ खेलबाट २८ जोड्दै लिगको अंक तालि ... बाँकी अंश»
गुम्यो एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला, क्लिन स्वीप हुनबाट जोगियो भारत
२०७२ माघ १० आइतबार, एजेन्सी । अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको भारतले पाँच खेलको एक दिवसीय श्रृंखला ४–१ ले गुमाएको छ । अन्तिम खेलमा सान्त्वना जित हासिल गरेको भारतले चार एक दिवयीय लगातार गुमायो । सिडनी क्रिकेट ग्राउण्डमा भएको अन्तिम खेलमा खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भएका मनिस पाण्डेले शतकिय पारी खेलेपछि भारत अन्तिम एक दिवसीय जित्दै क्लिन स्वीप हुनबाट जोगियो । पाण्डेले अविजित एक सय ४ रन जोडे । श्रृंखलामा सार्वाधिक रन बनाएका भारतीय व्याट्सम्यान रोहित शर्मा ‘म्य ... बाँकी अंश»
निर्णायक गोल गर्ने मेसीलाई सुआरेजले यसरी च्यापे
२०७२ माघ १० आइतबार, एजेन्सी । स्पेनिश लिग ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले मालागालाई हराएको छ । मालागाको घरेलु मैदानमै बार्साले २–१ को संघर्षपूर्ण जित निकाल्यो । बार्सालाई विजयी गराउन मुनिर अल हद्दादी र लियोनल मेसीले गोल गरे । मुनिरले खेलको दोस्रो मिनेटमै गोल गरेकामा ३२औं मिनेटमा मालागाका हुवाँपीले गोल फर्काउँदै १–१ को बराबरी गरे । ५२औं मिनेटमा मेसीले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । त्यसपछि दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेन । निर्णायक गोल गरेका मेसीले उरुग्वेन स्ट्राइक ... बाँकी अंश»
आर्सनललाई उछिन्दै लेस्टर शीर्ष स्थानमा, म्यानयुलाई झट्का
२०७२ माघ १० आइतबार, एजेन्सी । लेस्टर सिटीले शीर्ष स्थानको आर्सनललाई उछिन्दै इङ्गलिश प्रिमियर लिगमा अग्रता लिएको छ । शनिबार राति घरेलु मैदानमा स्टोक सिटीलाई ३–० ले हराउँदै लेस्टर लिग अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । सिटीलाई विजयी गराउन डानियल ड्रिङ्कवाटर, जेमी भार्डी र जोस लिओनार्दो उलाले एक–एक गोल गरे । यो खेलपछि लेष्टर सिटीको २३ खेलबाट ४७ अंक भएको छ । एक खेल कम खेलेको आर्सनलको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटी बराबर ४४ अंक रहेपनि गोल अन्तरले पछ ... बाँकी अंश»
‘अव फुटबलमा कालो दिन आउदैन्न’
२०७२ माघ ९ शनिबार, काठमाडौं ।राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले अब फुटबलमा फेरि कालो दिन नआउने बताएका छन् । बंगबन्धु गोल्ड कप विजेता नेपाली फुटबल टोलीलाई सम्मान गर्न दशरथ रङ्गशालमा शनिबार बेलुका आयोजित कार्यक्रममा सदस्य सचिव विष्टले नेपाली खेलकुदमा लागेको कालो दागलाई अबका दिनमा फर्केर हेर्नु नपर्ने बताए । अबका दिनमा कुनै पनि खेलाडीहरुले म्याच फिक्सिङ्गको आरोप झेल्नु नपर्ने बताए ।विष्टले खेलाडीहरुले बगंबन्धु रङ्गशालामा नेपाली खेलाडील ... बाँकी अंश»
नेपाली फुटबल टोलीलाई स्वागत गर्न को को पुगे एयरपोर्ट ?
२०७२ माघ ९ शनिबार, काठमाडौं । २३ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा उपाधि जितेको नेपाली फूटबल टोली शनिवार स्वदेश फर्किएको छ । टिम नेपाल फर्कने क्रममा स्वागत गर्न त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेला भएका सयौं शुभेच्छुकहरुले उनीहरुलाई भव्य स्वागत गरेका छन् । टोली बिमान बंगलादेशबाट दिउँसो २ बजेर १० मिनेटमा नेपाल आइपुगेको हो । खेलाडी तथा अफिसियलहरुलाई स्वागत गर्न आफन्त खेलप्रेमीहरु लामोसमयदेखी एयरपोर्टमा थिए। उनीहरु आआफ्नो मोवाइलमा उनीहरुका तस्विर र भिडियो ... बाँकी अंश»
वेष्टईण्डिजका शिवनारायण चन्द्रपालद्वारा क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा
२०७२ माघ ९ शनिबार, एजेन्सी। वेष्ट ईण्डिजका खेलाडी शिवनारायण चन्द्रपालले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। वेष्ट ईण्डिजकालागि १६४ टेष्ट क्रिकेट खेलेर ११, ८६७ रन बनाएका ४१ बर्षिय चन्द्रपालले सन्यास घोषणा गरेका हुन्। उनी मई २०१५ देखि वेष्ट ईण्डिज टिममा परेका थिएनन्। अन्तिम श्रृंखला ईङल्याण्डसँग खेलेका चन्द्रपालले राम्रो प्रदर्शन नगरेपछि टिमबाट बाहिरिएका थिए। टिममा फर्किने आशले केहि समय बिताए पनि उनले अन्तत: सन्यासको घोषणा गरेका छन्। टेष्ट क ... बाँकी अंश»
खेलाडी आउने बेला आज विमानस्थलमा थामीनसक्नु हुने
२०७२ माघ ९ शनिबार, काठमाडौं । २३ वर्षपछि नेपाललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको उपाधि दिलाउने नेपाली फुटवल खेलाडी आज स्वदेश फर्किने भएपछि उनीहरुको स्वागतको भव्य तयारी भईरहेको छ । बंगलादेशमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटवल टिम आज शनिबार दिउँसो १ बजे स्वदेश फर्कने भएको हो । ऐतिहासिक जित हात पार्दै स्वदेश फर्किन लागेको नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न, बधाई दिन र खुशी साटासाट गर्न सुवेच्छुकहरुको ठुलो भिड लाग्ने भएको छ । टोलीलाई भव्य स्वागका लागि उच्चपदस्थ सरकारी ... बाँकी अंश»
खेलाडीलाइ भब्य स्वागत सहित जनही सात लाख पुरस्कार
२०७२ माघ ८ शुक्रबार, काठमाडौं । बंगलादेशमा विहिबार बंगबन्धु गोल्डकप च्याम्पियन फाइनल खेलमा नेपाल विजयी भए संगै नेपाल राष्ट्रिय फुटवल टिमका प्रत्येक खेलाडीलाइ जनही ७-७ लाख पुरस्कार पाउने भएका छन्। बंगबन्धु गोल्ड कप फुटवलको उपाधि जितेसँगै अखिल नेपाल फुटवल संघ एन्फाले प्रत्येक खेलाडीलाइ जनही ५-५ लाख दिने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी राखेपले २-२लाख दिने घोषणा गरेकाो छ। एन्फाले प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन र उपेन्द्रमानसिंहलाई पनि जनही ५-५ लाख दिने बताएको छ । दु ... बाँकी अंश»
नेपालको ऐतिहासिक जित, बंगबन्धु गोल्डकपको उपाधि कब्जा, २३ वर्षे उपाधि खडेरीमा पूर्णविराम
२०७२ माघ ८ शुक्रबार, काडमाडौं । बंगलादेशको राष्ट्रिय रंगशालामा नेपालले इतिहासकै शानदार प्रदर्शन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा २३ वर्षे उपाधि खडेरी चिरेको छ । नेपालले बहराइनको २३ वर्ष मुनिको टोलीलाई ३–० ले हराउँदै बंगबन्धु गोल्डकपको उपाधि कब्जा गरेको छ । यसअघि नेपालले सन् १९९९ मा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा फाइनल खेलेको थियो । बंगबन्धुको सेमिफाइनलमा नेपालले बलियो प्रतिस्पर्धी माल्दिभ्सलाई ४–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको ह ... बाँकी अंश»
अन्तिम खेलमा निरिह पाकिस्तान बिरुद्ध न्युजिल्याण्डको श्रृखंला कब्जा
२०७२ माघ ८ शुक्रबार, एजेन्सी। न्युजिल्याण्डमा जारि पाकिस्तान बिरुद्दको टि-२० क्रिकेट श्रृखंला अन्तर्गत तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा न्युजिल्याण्ड बिजयी भएको छ। श्रृखंलाको पहिलो खेल पाकिस्तानले जितेको थियो भने दोस्रो तथा अन्तिम खेल जित्दै घरेलु टोली न्युजिल्याण्डले श्रृखंला २-१ले हात पारेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटीङ गरेको न्युजिल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १९६ रनको स्कोर खडा गरेको थियो। उसकालागि कोरी एण्डरसनले ४२ बलमा ४ छक्का र ६ चौकाको मदतले ८२ ... बाँकी अंश»